Kutheni amanqaku amatsha e-Twitter ENGAYE uMtshintshi woMdlalo
NgeCawa, ngoJulayi 8, 2012 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 UAndrew K Kirk
I-Twitter iye umemezele iseti yeempawu ezintsha eziphucula ukukhangela kunye neempawu zokufumanisa. Ngoku ungakhangela kwaye uboniswe iiTweets ezifanelekileyo, amanqaku, iiakhawunti, imifanekiso kunye nevidiyo. Olu lutshintsho:
Izilungiso zopelo: Ukuba uliphose kakuhle igama, i-Twitter izakubonisa ngokuzenzekelayo iziphumo zombuzo wakho.
Iingcebiso ezinxulumene nokoUkuba ukhangela isihloko apho abantu basebenzise amagama amaninzi, i-Twitter iya kubonelela ngeziphakamiso ezifanelekileyo kwimigaqo efanayo.
Iziphumo ezinamagama okwenyani kunye namagama abasebenzisiXa ukhangela igama elifana 'noJeremy Lin,' uya kubona iziphumo ezichaza igama lokwenyani lomntu kunye negama labo lomsebenzisi weakhawunti ye-Twitter.
Iziphumo zabantu obalandelayo: Ukongeza ekuboneni 'Zonke' okanye 'kwiiTweets' eziphezulu kukhangelo lwakho, ungabona ngoku iiTweets malunga nesihloko esinikiweyo kuphela kubantu obalandelayo.
Ngelixa ndothusayo iinzame zobunjineli, andiziboni kwangaphambili izinto ezintsha ze-Twitter zokuKhangela kunye nokuFumana njengomtshintshi womdlalo ngenxa yezizathu ezibini:
1. Uhlaziyo lweTwitter ngesantya esiBetha ngengqondo
Yonke imihla, kukho i-1 yezigidi zeakhawunti ezintsha ze-Twitter ezenziweyo kwaye i-175 yezigidi zeTweets zithunyelwa! Lo msinga wolwazi uhlala ulungile, kodwa awuzibolekisi kakuhle ekukhangekeni nasekufumaneni. Andizukuntywila kwii-tweets zezihloko ezithile; endaweni yoko, ndikhangela abantu abanomdla ukuba ndibalandele.
2. I-Twitter ixutywe ngaphandle kweTwitter.com
Yintoni eyenze ukuba i-Twitter ibe yimpumelelo emangalisayo kwiminyaka yokuqala, yayikukuba ulwazi lunokwenziwa, lwetyiswe, kwaye kwabelwane ngalo ngokwahlukileyo ngokupheleleyo kuTwitter.com. Le suite yomeleleyo yee-API incede ukukhuthaza iitoni zokukhula. Kunzima njenge-Twitter execs izama ukubuyisela abantu kwiTwitter.com, abantu bakhululekile ukusebenzisa kunye nokubona ii-tweets kwamanye amaqonga eqela lesithathu. Ngeso sizathu, uPhando luka-Twitter kunye neempawu zokuFumanisa azizukubonwa ngabasebenzisi abaninzi abanzima.
Isango elinye, injineli kwi-Twitter ekhokela intlawulo, IPankaj Gupta unesiphiwo kakhulu; ukwalile ukunikezelwa okuvela kuGoogle nakuFacebook ukuze asebenze kuTwitter. Ngokuqinisekileyo ukrelekrele ngokwaneleyo ukuba andibonise ndiphazama
Ndonwabile ukwamkela umnikelo ovela ku @twitter (uxolo @uphando kunye @facebookNdiyanithanda, kodwatwitter kulapho ndizakuba khona…)
-Pankaj Gupta (@pankaj) Matshi 2, 2009
Ucinga ntoni? Ngaba ezi zinto zintsha ziya kuba ngumdlalo otshintsha i-twitter? Shiya iingcinga zakho kunye nezimvo zakho apha ngezantsi.
tags: Social Media MarketingTwitterUkufunyanwa kwe-twitterUkukhangela kwi-twitter
UAndrew K Kirk
UAndrew K Kirk nguMseki woBuso i-Buzz, enceda abanini bamashishini abancinci basebenzise amandla entengiso ye-Intanethi. Abathengi bakhe bangoku baphakamise ngaphezulu kwe- $ 3.5 yezigidi kwinkxaso-mali. Unikezela ngenani eliqingqiweyo lovavanyo lwasimahla lokuthengisa kwi-Intanethi.
Zitshintsha njani iitafile kwiindlela zokuthenga
NgoJulayi 8, 2012 ngo-3:32 PM
Soloko kumnandi ukubhala nokwabelana nani nonke. Enkosi kulo lonke iqela leBlog yeTekhnoloji yeNtengiso!
Jul 9, 2012 ngo-4: 45 AM
I-Twitter ngokwayo iyatshintsha umdlalo, sonke siyisebenzisa ngeendlela ezahlukeneyo kwaye sisazama ukusebenzela okunokwenzeka, njengoko ngokwenene i-Twitter injalo. Naziphi na izongezo kwinketho yokukhangela ebuhlungu yamkelwe. Kumnandi ukuthetha ngalo mbandela nangona kunjalo ndiyakwamkela oko, enkosi Paul
NgoJulayi 9, 2012 ngo-2:10 PM
@twitter-205666332:disqus Enkosi ngezimvo zakho! UTwitter ngumtshintshi womdlalo; iyamangalisa into ethethwa kuhlaziyo lwabalinganiswa kwintlalontle nakwihlabathi le-intanethi.
Ndicinga ukuba uya kubona ngakumbi nangakumbi, i-Twitter izama ukuqhuba ukusebenza okungakumbi kwizinto ezikhoyo, ngokuchasene nokuphuhlisa iimpawu ezininzi.